HTC Desire 20 Pro bụ ekwentị na - esote nke Taiwanese | Gam akporosis
HTC Desire 20 Pro bụ Taiwan na-esote ekwentị nke pụtara na Geekbench
HTC na-akwado iji megharịa usoro Ọchịchọ ya, nke malitere ọtụtụ afọ na afọ gara aga ka emegharịrị na Ọchịchọ 19e na 19 +. Aha onye nọchiri ndị a bụ Ọchịchọ 20 Pro, dika aturu anya.
HTC Desire 20 ka ga-abịa. Ọ ga-abụ n'otu afọ a ka ọ ga-eweta ma malite n'ụdị ya na ọnụ ahịa akụ na ụba, ọ bụ ezie na enwebeghị nkọwa zuru oke banyere ya, yabụ, ihe niile enwere ike ịtụle n'oge a, dị ka n'isiokwu a, a na-enye ya dị ka asịrị naanị. Naanị ihe yiri ka ọ bụ nkwenye bụ aha ngwaọrụ ahụ, nke bụ akụkụ nke usoro nke aha ndị akpọrọ aha.
Onye ọrụ @IGIHE, site na akaụntụ Twitter ya, ọ kọrọ na ama ama dị na mmepe, yabụ n'oge ọ bụla na 2020 anyị ga-enweta ya. Ihe niile na-egosi na igba egbe ya na-eru nso.
Dị ka ọnụ ụzọ GSMArena akọwa, ama nwere aha koodu Bayamo, ma a ga-akpọ ya Desire 20 Pro maka ebumnuche azụmahịa. Ọ ga-adị ka Xiaomi Mi 10 site n'azu a na-ekwukwa na ya nwere igwe foto dị na akuku aka ekpe ya na modulu dị iche na mpụga otu. N’elu ihu ọ ga-adị ka OnePlus 8, nke ga-achọsi ike ịmata ihe, ebe ọ na-egosi na anyị ga-eche ihu n'etiti ma ọ bụ ọdụ ụgbọ mmiri.
Echere m na HTC anwụọla… Mana HTC Ọchịchọ 20 Pro dị na pipeline… Design is kind of a mix Otu gbakwunyere 8 na n'ihu na Mi10 na azụ a Yea, 3.5mm audio jack is there, lol?
- Chukwuemeka (@Nkechiagha) April 25, 2020
Ugbu a enweghi oke nkọwa gbasara njirimara ya na nkọwapụta teknụzụ ya, mana Geekbench, akara aka were ya wee kpọọ ya na nchekwa data ya dị ka "HTC HTC 2Q9J10000", nkọwa zuru ezu na ọ nwere igwe nwere isi asatọ na - ewepụta otu ugboro 1.8 GHz Ọ na-akọkwa na abịa na a 6GB Ram na gam akporo 10, n'otu oge nke ọ na-egosi na akara 312 dị na ngalaba otu isi na ihe ọzọ 1,367 nwetara site na ngalaba multicore.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » HTC Desire 20 Pro bụ Taiwan na-esote ekwentị nke pụtara na Geekbench
Batrị 4500 mAh nke nwere 30 W ngwa ngwa ka akwadoro maka Meizu 17
ZTE Blade V 2020 na-apụ apụ kpamkpam tupu ebido ya na Europe